Ihe niile gbasara igwe na Mee N'onwe Gị - Ikkaro
Anyị ga-amụta banyere igwe. Otu esi ewu ha, mezie ha, otu ha si aru oru, ihe ejiri me ha.
Anyị na-amata ọdịiche dị n’etiti igwe na usoro, n'ihi na anyị kwenyere na usoro kwesịrị usoro maka onwe ha, ebe ha nwere ikike zuru oke ime ya.
Na igwe anyị na-ezo aka na set nke ihe, akụrụngwa na usoro nke nwere ebumnuche ma ọ bụ ebumnuche (gbanwee ma ọ bụ mepụta ike, rụọ ọrụ, wdg)
Otu esi eme hypsometer ma obu n'akuku na anya
Kpọọ ya Hypsometa, mana amachaghị m nke ọma na nke a bụ hypsometer, mana ọ bụ ngwaọrụ iji tụọ akụkụ ma ọ bụ elu.
Dị ka RAE un Hypsometa bụ a akụrụngwa maka ịtụ oke dị elu karịa oke osimiri dabere na isi mmiri mmiri.
Ya mere, anyị ga-akpọ gị akuku, uzo na mita di elu na-eche ka onye na-agụ akwụkwọ hapụ anyị ikwu na aha ngwa ọrụ a.
Otu esi eme igwe swiiti owu
Unu niile erila swiiti owu na ngosi, mana ị ga-achọ inwe ike ịme onwe gị? Cesar Garci Trujillo, ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Esi mee ka a magnetik stirrer
Nye ọtụtụ nyocha, na ndị niile metụtara ngwaahịa kemịkal, a magnetik edemede.
Ya mere, anyị ewetara gị -esi mee ka a arụrụ n'ụlọ magnetik stirrer
Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị ga-eji fan sitere na isi iyi PC nke a na-etinye magnet neummium site na diski ike.
Esi mee ka eriri igwe
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, vidiyo na-esonụ na-egosi anyị akụkụ na otu esi eme otu ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme mmiri mgbapụta volumetric
Na-achọ ihe ọmụma na bọmbụ haịdrọlik, Achọtawo m vidiyo nke a mgbapụta volumetric nke Alvaro Morante mere na umu akwukwo nke UPV (Mahadum Polytechnic nke Valencia)
Ọ bụ ezie na enweghị m ohere, echetara m nke ahụ na isiokwu nke Igwe haịdrọlik, a malitere ịsọ mpi maka owuwu nke prọlik hydraulic, iji hụ nke nwere ike ịnyefe mmiri ọzọ na 1 nkeji. Amaghị m ma ọ bụrụ na bọmbụ nke vidiyo bụ maka asọmpi a nke ngalaba nke Ọrụma o mere ka m cheta
Olee otú ime ka arụrụ n'ụlọ Compressor na a ngwa nju oyi moto
Site na Mancera ha hapuru anyi nkuzi banyere otu esi eme compressor eji eme ulo nwere igwe di egwu. Nkuzi ya bia ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Mgbe ikiri vidio a, ejiri m n’aka na ị ga na-atụ anya wuo karti eletrik gi. Nke dị na vidiyo ahụ bụ ụgbọ ala eletrik eji ụlọ rụọ, ulo mere ka ndị America si akpọ ya
Ngosi ihe nlere nke ulo Neurotikart
Ma ọ bụrụ na i doghị anya, lee ka ntopute nke a si arụ ọrụ kaadị ikwenye kpamkpam na ịchọrọ ime otu. 6 batrị kama 4 na nke ahụ ruru 85 km / h
Anyị depụtaghachiri ederede dị n'okpuru nke na-akọwa Igwe Wimshurst, n'ihi na enwere ụfọdụ ihe na mgbe ha na-agbanwe ha, ha nwere ike ịga naanị mana ;-) Isi mmalite: Homer's Page, websaịtị nke m ga-akwado mmadụ niile ...
Chepụtara site James Wimshurst, izizi akọwapụtara na 1883 ma jiri ya, n'etiti ngwa ndị ọzọ, dị ka akwa-voltaji iyi nke oge X-ray akpa, Ọ bụ electrostatic igwe, nke mejuputara diski abuo nke ihe na-egbochi ihe, di ka ya, di ezigbo nso ma hazie ya n’usoro, n’uzo ha gha agbaghari ngwa ngwa na uzo ozo.
A na-emegharị ntụgharị ya site na enyemaka nke njikwa na-eme ihe abụọ na-eme ka eriri na-enweghị njedebe jikọtara ya, otu n'ime ha gafere. Ihu mpụta nke diski ọ bụla nwere ọtụtụ akụkụ ígwè nke glued n'akụkụ akụkụ ya, bụ nke n'oge ntụgharị ka a na-ehichapụ ya na brọsh ọla na-agbanwe agbanwe, nke a na-ejide na nsọtụ ụta ọla.
Igwe chaos ma obu okpukpu abuo
Ekwesịrị m itinye aha isiokwu tabloid sci-fi 'Otu esi eme igwe Chaos»Na o yiri ka anyị ga-ewu a igwe nke oke mbibi ma ọ bụ a 30 nke narị afọ mepụtara.
Ma gadget anyị na-egosi na post, ọ bụ ezie na ọ bụ igwe ogbaaghara, ọ bụghị ngwá ọgụ, kama okpukpu abuo eji na physics maka ọmụmụ banyere Chaos Theory.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịbụ na a bit emechu ihu, m n'aka na ị na-amasị video ;-)
Wulite igwe eji eme ụlọ
Site na Science na XXI faili ntanetịime na-ele anya, achọtara m ọkwa na-atọ ụtọ site na nnwale kọmputa elektrik. Na ebe ahu achoputara m Igwe onyonyo na ọchụchọ maka ozi na-amalite.
Un ihe onyonyo ọ bụ ụzọ dị mfe iji mara ma ọ bụrụ na arụ na-acha ọkụ eletrik ma ọ bụ na ọ bụghị.
Emepụtara electroscope site na William Gilbert na ọ bụ ezie na anaghịzi eji ya eme ihe taa ka e mepụtara ngwaọrụ ndị ọzọ dị ike karị ma dị irè, o yiri ka ọ dị mma maka a nyocha physics a ga-eme na klaasị nyocha.
Ihe osise nke mgbakọ electroscope ga-adị ka anyị na-ahụ na onyonyo enwetara na Thales